I-Television namaRadio Commerce - Ukubala kwe-NYE
I-Television namaRadio Commerce
NYECountdowns.com, i-llc. yiyona nkampani yeDade yeyodwa yezindlu zomhlaba ezakha kakhulu zokudala nokukhiqiza ... Killerspots.com, Inc.
Siye sabasiza amakhulu ama-nightclub, abagqugquzeli kanye nama-Arenas Emhlabeni wonke alungele iqembu lawo elikhulu kunazo zonke ze-15 iminyaka edlule! Manje ijika lakho! Udinga okuthile okusheshayo? Kwenziwe! Noma yiluphi ulimi. Noma ubuphi ubude. Nomaphi Emhlabeni!
Skrolela phansi ukuze ubone amadokhumenti wethu we-KILLER noma uvakashele isiteshi sethu esikhethekile
* Izikhangiso ze-Facebook ezansi kune-15 ¢ ngokuchofoza
I-60 SEC RADIO SPOT
Izimakethe zomsakazo ezizokwenza i-EPIC yakho entsha ka-New Year's Eve! Senze ukukhiqizwa komsakazo we-killer ngamakhulu ama-nightclub nezindawo emhlabeni wonke unyaka nonyaka. Thola umsakazo we-killer ozohweba ukuthi empeleni uzokuthola ibhizinisi manje!
I-30 SEC TV SPOT
Ithelevishini ye-Incredible nezindawo zeWebhu ezizoqothula amasokisi akho ... kuLWIMI LONKE! Masisebenzise i-Telly Award yethu yokuwina amakhono wokukhiqiza okusakaza ukudala ukuletha izimbongolo ngokusebenzisa iminyango yakho ngo-Eva Wonyaka Omusha! Isikhathi sokuguqula yisikhathi sezinsuku zebhizinisi ze-5-7 ... ngakho HURRY ngaphambi kwesikhathi kuphelile!
I-60 SEC WEB / SPOT TV
Imithombo yezokuxhumana ingenye yezindlela ezingcono kakhulu zokugqugquzela u-Eva Wonyaka Omusha we-Epic. Ake sikuenze ividiyo yewebhu ongabelana ngayo futhi ulethe abantu abaningi! Uzoyithanda iqinisekisiwe.